११ वर्ष अध्यापनमा बिताएका प्रिन्सिपल भन्छन्, ‘पाठ्यक्रम बनाउँछौं तर स्रोतलाई ख्याल गर्दैनौं’ |
अन्तवार्ता शुक्रबार, १९ चैत, २०७२
ध्रुबप्रसाद पोखरेल भ्याली भ्यू स्कुलका प्रिन्सिपल हुन् । झण्डै ११ वर्षदेखि शिक्षण पेशमा रहेका पोखरेलले नेतृत्व गरिरहेको स्कुल भ्याली भ्यूले गत वर्ष एसएसली परिक्षामा नेपाल टप गरेको थियो । लामो समय प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिकस्तरको शिक्षालाई नजिकबाट नियालिरहेका पोखरेलसँग वर्तमान शैक्षिक प्रणाली, पाठ्यक्रमलगायतका यावत विषयमा एजुकेशन समाचारले गरेको कुराकानीः
स्कुल शिक्षालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
स्कुलिङस्तरको शिक्षालाई फाउण्डेशनका रुपमा लिइन्छ । भोलिको उच्च शिक्षाको आधारका रुपमा पनि माध्यमिक शिक्षा रहेको छ । वास्तवममा धेरै मान्छेले माध्यमिक शिक्षालाई सहज रुपमा लिइरहेका छन् । तर, उच्च शिक्षाको आधार भनेकै माध्यमिक शिक्षा हो ।
नेपालको सन्दर्भमा माध्यमिक शिक्षालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा धेरै प्रकारले माध्यमिक शिक्षालाई हेर्ने गरेको पाइन्छ । देशका सबै ठाउँमा अहिले पनि उच्च शिक्षा पुग्न सकेको छैन । सबै ठाउँमा पुगेको शिक्षा भनेको माध्यमिक शिक्षा हो । यसलाई अझ ब्यवस्थित गरेर लाने हो भने नेपालको सन्दर्भमा सहरमा भन्दा पनि बाहिर राम्रो चेतना जगाउनुपर्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा माध्यमिक शिक्षालाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ ।
गाउँ र शहरको शिक्षामा त ठूलो खाडल देखिन्छ नि ?
पाठ्यक्रम सबैतिर एउटै हो । जुम्ला पढ्ने पाठ्यक्रम र काठमाडौंमा पढाइहुने पाठ्यक्रम दुवै एउटै हो । यसलाई कसरी दिन सक्छौ भन्ने कुरा मात्र फरक हो ।
काठमाडौंका बोर्डिङ र नीजि विद्यालयहरुमा जसरी शिक्षा दिन सक्छौं । त्यसैगरी विकट ठाउँहरुमा पनि त्यस्तै किसिमको शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ ?
धेरै खाडल यसमा म देख्दिनँ । नेपाल सरकारले यत्रो लगानी गरेको छ । विभिन्न लेभलका शिक्षकहरुको आपूर्ति गरेको छ । आखिर उहाँहरुले पढाउने जुन लेभल हो र यहाँको शिक्षाको लेभल त उस्तै उस्तै हो । तर, त्यही कुरालाई डेलिभर कसरी गर्ने भन्ने कुरामात्र फरक हो । पाठ्यक्रम पनि त्यही हो, समय पनि त्यही हो । एसएलसीकै कुरा गर्नुस् नेपालभरि एकै समयमा जाँच हुन्छ, एकै समयमा शैशिक सत्र सुरु हुन्छ । समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने हो । प्राइभेटले अलि बढी समय सदुपयोग गरेका छन् भने अरुले त्यसलाई नगरेर खाडल देखिएको हो ।
विद्यार्थी उत्पादनका हिसाबले तपाईंको स्कुल टप हुने अनि जुम्ला, हुम्लाजस्ता विकट ठाउँका विद्यालयहरु निल हुने अवस्था पनि त छ नि ?
हामीले विशेषगरी विद्यार्थीमा के कस्तो प्रतिभा छ भनेर हेर्छौ । हामीले विद्यार्थीलाई समय दिएर त्यो केलाइहेका हुन्छौं, लगानी गर्छौ । पहिलेको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने सरकारी स्कुलबाटैं उच्च रिजल्ट आएको पाइन्छ । त्यो अहिले किन भएन भन्दा नीजि स्कुलले विद्यार्थीहरुको प्रतिभालाई केलाएर समयअनुसारको शिक्षा दिन सके, सरकारीले सकेनन् ।
भनेपछि सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको प्रतिभा निखार्नेतिर ध्यान दिएनन् ?
निर्खानका लागि समय दिनुपर्छ । विद्यार्थीको सम्भावना चिन्न नसकेर नै अहिले खाडल देखिएको हो जस्तो लाग्छ ।
ग्रेडिङ सिष्टम पनि लागु हुँदैछ । कसरी हेर्नुभएको छ ?
ग्रेडिङ त अन्तर्राष्टिय मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्रणालीको मुल्यांकन पद्धति हो । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । अहिले दिनदिनै फरक भर्सनहरु आइरहेकाले ग्रेडिङ भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी नै दोधारमा छौं । किनभने कहिले तीन वटा विषयमा राम्रो ल्यायो भने सबैमा राम्रो भन्छन्, कहिले सबैमा राम्रो ल्याउनुपर्ने कुरा आउँछ । ग्रेडिङमा पनि के हुन्छ भने कुनै विषयमा ९० ल्याउने भनियो तर केही विषय यस्ता हुन्छन्, जसमा ९० आउँदैं आउदैन । जस्तो सोसल । त्यसलाई कसरी ग्रेडिङ गर्ने ? ९० भन्दा तल सोसलमा आयो भने त्यसलाई कसरी ग्रेडिङ गर्ने ? ग्रेड बी दिने त्यसलाई ? त्यसैले यस्ता कुराहरुलाई अलि प्रष्ट पारेर, विषयहरुको मर्मलाई बुझेर ग्रेडिङ गरियो भने यो प्रणाली राम्रो हो । तर, यसमा विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा विस्तारै कम हुने देखिन्छ । किनभने, ८९ आउनेको पनि ए आयो ८० आउनेको पनि ए नै । लाष्ट एयर दिक्षित पौडेलले ९४ ल्यायो, त्यही कारणले हामीले नेपालभरिकै उच्च रिजल्ट भनेर प्रचार गर्यौं । त्यसैले ग्रेडिङ सिष्टम प्रष्ट रुपमा ल्याउनुपर्छ ।
माध्यमिक शिक्षाका सम्भावना कस्तो छ ?
शिक्षाले सर्वाङगीण विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो मोटो नै एजुकेशन फर पर्सानिलिटी डेभपलमेण्ट छ । त्यसैले अहिलेको समयमा ज्ञानलाई दैनिक ब्यवहारमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा अबको शिक्षाको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ । यसका लागि कन्टेन्ट, कन्टेष्ट र कल्चर आवश्यक हुन्छ । हामीले सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीमा अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ । जसले एजुकेशन सार्थक हुन्छ । अहिले संसारभर चलेको एजुकेशन मोडल कुन भन्दा सिंगापुर मोडल भनेर आइसक्यो । सिंगापुर मोडलमा एजुकेशन भनेको ज्ञान मात्र ट्रान्सफर गर्ने होइन्, एजुकेशन भनेको दिनप्रतिदिन त्यसलाई सदुपयोग गरेर आफूलाई सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्छौं । सबै कुरामा स्वालम्बी बन्न सक्ने नै शिक्षा हो भन्ने कुरा सिंगापुर मोडलले अगाडि सारेको छ । त्यसैले उसको पाठ्यक्रम अमेरिकामा लागु भइसक्यो । हाम्रै देशमा पनि विभिन्न मानिसहरु त्यहाँ गएर अध्ययन गरेर त्यस्तो एजुकेशन आवश्यक रहेछ भन्नेमा पुगेका छन् ।
स्कुलिङमा बेस बलियो बनाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई सबै कुरा सिकाउनुपर्ने जस्ता कारण च्यालेजिङ छ तर गाह्रो छैन । अभिभावक र शिक्षकले मान्ने लेभल भएकाले त्यसकारण गाह्रो छैन । चुनौती कन्टेन्टलाई पिलर बनाएर अगाडि बढाउँदैं गयो भने सबै राम्रो हुन्छ ।
कोर्स कन्टेन्टहरु ब्यवहारिक भएनन् भन्ने कुरा पनि उठ्छ नि ?
कोर्स कन्टेन्ट त्यो एउटा गाइडलाइन हो । हाम्रा बच्चाहरुलाई कति कुरा सिकाउने भन्ने आधार हो । त्यसलाई ब्यवहारिक बनाउने भन्ने कुरा त सिकाउने मान्छे र स्कुलको पोलिसीमा निर्भर हुन्छ । पाठ्यक्रम र यो लेभलमा बच्चाले यति सिक्ने भनेर बनाइएको हो । सबै कुरा पाठ्यक्रमले नै निर्धारण गरयो भने अरुले के गर्ने त ?
अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अलि ब्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाएर लैजान सकिदैन ?
अहिले एउटा ओबिटी भन्ने नयाँ विषयमा आएको छ । जुन कक्षा ६ देखि ८ सम्म लागु भएको छ । त्यो धेरै हिसाबमा ब्यवहारिक छ, यसको ५० प्रतिशत थ्योरी र ५० प्रतिशत प्रयाक्टीकल छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा भनेर ९ देखि १२ सम्म लागु गर्ने भनिएको छ । त्यो सम्भावना भित्र छ, तर त्यसलाई लागु गरेर लैजाने क्षमता कति छ भन्ने हो । लागु गर्नका लागि स्रोतहरुको पनि पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी के मा फेल छौं भने पाठ्यक्रम बनाउँछौं तर स्रोतलाई ख्याल नगरी बनाउँछौं । स्रोत नहेरी पाठ्यक्रम बनाउने कुरा गाह्रो कुरा हो । हस्पिटल नै छैन भने स्कुलमा मेडिसिन पढाएर के गर्ने ? हस्पिटल छ भने मेडिसिन पढाउनुस्, त्यो ब्यवहारमा लैजान सहज हुन्छ ।
अहिले शिक्षामा देखिएका विविध र फरक प्रयोगले शिक्षामा कत्तिको असर पार्छ ?
मन्टेश्वरी थिम्याटीक प्रयाक्टीस हो, यो कुनै नयाँ होइन । यसलाई लर्निड बाइ डुइड भन्छ त्यसैले विद्यार्थीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ । यो भनेको कुनै नयाँ होइन । सिकाइ भनेको पूरानै हो त्यसमा म्याटिएल्सको बढी हुन्छ, त्यसैले यो सफल भइरहेको हो । म्याटिएल्सले विद्यार्थीलाई युजटु बनाउँछ, त्यसैले उनीहरु सिक्न लालायित हुन्छन् ।
माध्यमिक शिक्षामा चुनौतीहरु के के हुन ?
सुरुमा ९ देखि १२ एसएसआरपी लागु गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा पाठ्यक्रम कस्तो हुने र कसरी जाने भन्ने कुरा दोधारमै छ । अहिले फेरि विद्यालय सुधार कार्यक्रम भने लागु गरेको छ । यसमा प्रष्ट खाका आइसकेको छैन । दोस्रो, एसेसमेन्ट पद्धति तलमाथि गरिराख्दा विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धा पनि के हुने भन्ने अन्योल छ । अर्को विभिन्न पाठ्यक्रमहरु पनि अभ्यास हुँदैं आएका छन् । कस्तो खालको पाठ्यक्रम माथिसम्म लाने, ब्यवहारिक र सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा ब्याख्या र डिजाइनिङ प्रष्ट हुनुपर्छ । यो कुरा अहिलेसम्म पनि डिलेमामा नै छ । यसमा सरकारको स्पष्ट पोलिसीको आवश्यकता छ ।